Tube Mill & Pipe Machinery Manufacturers - China tube Mill & Pipe Machinery Factory & Suppliers
C / Z Purlin Roll akpụ Machine
Bee ogologo akara
The Cut To Length Line which are used for uncoiling, leveling and cutting the metal eriri igwe n'ime chọrọ ogologo nke ewepụghị mpempe ihe na stacking.It adabara maka nhazi oyi akpọrepu na-ekpo ọkụ akpọrepu ígwè, eriri igwe, galvanized ígwè eriri igwe, sịlịkọn ígwè eriri igwe, igwe anaghị Ngwunye ígwè, eriri igwe aluminom wdg. n'ime obosara dị iche iche dị ka mmepụta onye ọrụ si chọọ ma belata ya.
Automatic High Speed ​​Slitting Line
Automatic High-Speed ​​Slitting igwe a na-eji ya maka eriri igwe nwere nkọwa dị iche iche, site na ikpuchi, ịkwa akwa, na igbutu ogologo na efere dị larịị dị ka ogologo na obosara dị mkpa.
Akara a na-etinye aka na ụlọ ọrụ nhazi efere ọla, dịka ụgbọ ala, akpa, ngwa ụlọ, ngwugwu, ihe owuwu, wdg.
igwe anaghị agba nchara Industrial anwụrụ Ndinam igwe
Senweghi ike-ígwè Pipe Ime Machine Series na-eji tumadi na mmepụta nke ulo oru igwe anaghị agba nchara anwụrụ. Dị ka welded anwụrụ technology mmepe, igwe anaghị agba nchara welded anwụrụ dochie enweghị nkebi anwụrụ n'ọtụtụ ebe (Dị ka chemical, ọgwụ na ahụ ike, winery, mmanụ, nri, ụgbọala, ntụ oyi, wdg)
ERW tube & Pipe Mill Machine Usoro ndị pụrụ iche na ngwa na-emepụta elu-ugboro ogologo onuete welded anwụrụ na tube maka bughi ọkpọkọ na ulo oru anwụrụ na Φ4.0～～273.0mm na mgbidi mgbidi .02～12.0 mm. The dum akara nwere ike iru elu kpọmkwem na elu na-agba site na njikarịcha imewe, kacha mma ihe nhọrọ, na ezi andgha na na-apụta. N'ime akụkụ kwesịrị ekwesị nke ọkpọkọ ọkpọkọ na ọkpụrụkpụ mgbidi, a na-agbanwe ọsọ ọsọ ọsọ.